iPhone 13: bilowga, qiimaha iyo dhammaan qeexitaankiisa | Wararka IPhone
iPhone 13: bilowga, qiimaha iyo dhammaan qeexitaankiisa
Waxaan ku jirnaa fiditaankii ugu dambeeyay ka hor inta aan la soo bandhigin oo la bilaabin iPhone 13 ee soo socda, waxaanan dooneynaa inaan ku soo koobo wax kasta oo aan illaa iyo hadda ka ognahay casriga casriga ah ee Apple hal maqaal oo aan ku cusbooneysiin doono macluumaadka soo muuqanaya toddobaadyada soo socda.
1 IPhone 13 taariikhda la siidaayo
2 IPhone 13 iyo 13 moodooyinka Pro Max
3 Naqshadaynta iPhone-ka cusub 13
4 Midabada iPhone-ka cusub 13
5 Sifooyinka loo qaato in la iska siiyo
5.2 Aqoonsiga wajiga
5.4 Batariga iyo lacag-bixinta
5.5 Noocyada kale
6 Immisa ayuu ku kacayaa iPhone 13?
IPhone 13 taariikhda la siidaayo
Kadib dib udhaca ku yimid bilawga iPhone sanadkii hore, sababo la xiriira Cudurka faafa ee COVID-19, sanadkaan waxaa la sii odorasayaa in soo bandhigidiisa iyo soo saarkeeda xigta ay dhici doonto xili hore. Waa run in sanadkaan xaalada cudurka uu is badalay laakiin waxaa jira dhibaatooyin badan oo la xiriira keenista microchips, sikastaba waxaa jira warar xan ah oo xaqiijinaya TSMC waxay mudnaanta siineysaa soosaarida qaybaha Apple, oo haddii aan ku darno tan in xannibaadda Huawei ay yareyneyso iibkeeda in badan, waxay noqon kartaa in IPhone-ka uusan ku dhicin yaraanta qaybaha.
Iyada oo intaas oo dhan, taariikhda sii deynta ee iPhone 13 dhammaan noocyadeeda hore loogu marin karaa bisha Sebtember. Xantu waxay tilmaamaysaa Sebtember 17 ama 24 sida taariikhaha ugu badan bilaabid. Haddii taariikhda ugu horreysa la xaqiijiyo, soo bandhigiddeeda waxay dhici doontaa Talaadada, Sebtember 7 (Waxaan horey u ogaanay sida Apple u jecel yahay Talaadada dhacdooyinkiisa) bilowga boos celinta Jimcaha soo socda, Sebtember 10, iyo iibinta tooska ah ee dukaamada jirka iyo internetka Sebtember 17. Taariikhahaas, sidaan nidhaahno, way dib u dhici karaan toddobaad haddii iibka tooska ahi noqon lahaa Sebtember 24.
IPhone 13 iyo 13 moodooyinka Pro Max
Sannad kasta waxaa jira dood isku mid ah oo ku saabsan magaca IPhone-ka cusub. Waa aaladda kaliya ee Apple ee nambar ku hesho magaceeda, oo si cad u muujineysa nooca aan ka hadlayno. iPad Pro, iPad Air, iPad, MacBook, iMac ... Apple ma raacdo isla shuruudahan markii ay magacaabayaan inta harsan buugooda, sidaa darteed dhowr sano ayaa lagu xantaa in iphone uu iska dhaafi karo nambarka oo loogu yeero kaliya iPhone. Laakiin waxay umuuqataa in sanadkaan uusan sidaa noqon doonin, wuuna kusii socon doonaa lambarka qeybta ugu dambeysa magaceeda.
Su’aasha taagan ayaa ah Ma loogu yeeri doonaa iPhone 12s ama iPhone 13? IPhone 11 waxaa ku xigay iPhone 12, ma ahan 11s, laga yaabee inaysan xusuusinin dhacdooyinkii taariikhdaas masiiriga ah ee Mareykanka, ama si fudud maxaa yeelay moodelkan cusub wuxuu keenay isbadal naqshadeyn ah oo kaga duwan kii ka horeeyay. IPhone-kan cusub 13 waxaa laga filayaa inuusan keenin isbeddelo waaweyn oo xagga naqshadeynta ah marka loo barbar dhigo iPhone 12, laakiin xanta ayaa tilmaamaysa in aan loogu yeedhi doonin iPhone 12s laakiin loo yaqaan iPhone 13.
Noocyadee ayaa laga heli doonaa iPhone-kan cusub? Falanqeeyayaasha badankood waa isku raacsan yihiin taas ma jiri doonaan wax isbadal ah marka loo eego jiilka hada jira sidaas darteedna iPhone kasta 12 wuxuu yeelan doonaa badalkiisa sanadkan:
iPhone 13 mini: oo leh shaashad 5,4-inji ah, oo beddelaya iPhone 12 mini.
iPhone 13: oo leh shaashad 6,1-inji ah, oo beddelaya iPhone 12.
iPhone 13 Pro: oo leh shaashad 6,1-inji ah, oo beddelaya iPhone 12 Pro.
iPhone 13 Pro Max: oo leh shaashad 6,7-inji ah, oo beddelaya iPhone 12 Pro Max.
Waxay umuuqataa inay tahay iibka liita ee iPhone 12 mini saameyn kuma yeelan doono sii waditaankeeda inta udhaxeysa iPhone-ka sanadkaan hadii aan fiiro gaar ah u yeelano wararkii ugu dambeeyay, inkasta oo ay wali jiraan kuwa xaqiijinaya inaan dib loo cusbooneysiin doonin sanadkaan. Shaki kuma jiro qaabka ugu badan ee lagu qabto biinanka dhammaan qaybaha kala duwan. Marka laga hadlayo iPhone SE, ma jiri doono wax cusbooneysiin ah sanadkan 2021-ka, waana inaan sugnaa ilaa 2022 si aan u aragno moodeelka cusub ee Apple na siisay.
Naqshadaynta iPhone-ka cusub 13
Apple waxay ku dari doontaa waxyar oo isbedel ah qaabka guud ee iPhones cusub. Waxay ku sii wadi doonaan dhabarka dhalooyinka, wax muhiim u ah lacag bixinta wireless-ka si ay u shaqeeyaan, iyo geesaha fidsan, sida iPhone 12. Dhinaca hore waxaan sii wadi doonnaa shaashadda oo fadhineysa dhammaan hore, "notch" ee lagu gartay iPhone-ka tan iyo markii uu iPhone X joogi doono, inkasta oo cabirkiisu hoos u dhacay mahadsanid meeleynta afhayeenka cusub. Moodooyinkaan cusub sameecadaha ma fariisanayo bartanka buundada Taabadalkeed, waxay ku yaali doontaa cidhifka kore ee shaashadda, iyada oo ka tagaysa meel badan oo kamaradda hore ah iyo dhammaan qaybaha FaceID ee la dhigayo, sidaa darteed ballaadhkiisa waa la dhimi karaa.
Cabirka iPhone-ka cusub wuxuu la mid noqon doonaa sida moodellada hadda jira, kaliya dhumucda ayaa si yar loo kordhin doonaa, qiyaastii 0,26 mm, wax aanan ogaan doonin markaan gacanta ku hayno, laakiin taasi waxay na siin kartaa xoogaa dhibaato ah daboolida moodooyinka hada jira. Si kastaba xaalku ha ahaadee, kiisaska iPhone 12 uma shaqeyn doono iPhone-ka cusub ee 13, maxaa yeelay moduleka kamaraddu wuu weynaan doonaa.
Waa si sax ah qaybtan iPhone-ka ah halka aad awoodi doontid inaad ku aragto isbeddelada yar ee naqshadeynta sannadkan, maaddaama ujeeddooyinka ay sii weynaan doonaan oo ay ka muuqan doonaan wax ka badan jiilka hadda jira, sidaa darteed moduleka, sidaan horay u soo sheegnay, wuxuu sameyn doonaa ka weynaan. Xanta qaar waxay kahadlaan qaab cusub oo qaabaysan oo muraayadaha indhaha ee iPhone 12 iyo 12 mini, taas oo sii wadi doonta inay lahaato laba kaliya. Suurtagalnimada in ujeeddooyinka 2/3 (ay kuxirantahay tusaalaha) ay ilaalinayaan hal safayr oo safayr ah, halkii aad shaqsi ahaan ugu samayn lahayd sida moodooyinka hadda jira, ayaa sidoo kale laga wada hadlay.
Ma dooneyno inaan ku guul darreysano inaan sheegno suurtagalnimada ku saabsan isku-xiraha hillaaca ee iPhone-ka cusub, maxaa yeelay inkasta oo ay u muuqato inaysan u badnayn, waxaa jiray warar xan yar oo ku saabsan suurtagalnimada in ugu yaraan hal nooc uu ka maqan yahay nooc isku xirayaasha ah. Nidaamka 'MagSafe' ee la sii daayay sanadkii hore kaliya uma adeegi doono in lagu dalaco qalabka laakiin sidoo kale gudbinta xogta. Sidaan dhahno waxay umuuqataa wax si dhaqso ah u imaan kara laakiin sanadkaan uma badna.
Midabada iPhone-ka cusub 13
Midabada iPhone-ka cusub had iyo jeer waxay abuuraan warar badan oo hareerahooda ah, in kastoo hadhow aan la xaqiijin inta badan kiisaska. Xaqiiqdii wararka xanta ah waxay leeyihiin aasaaskooda, Apple wuxuu sameeyay tijaabooyin badan oo midabbo kaladuwan leh intii lagu jiray xilligii horumarka ee iPhones-ka cusub, ka tagista midab cusub ama laba dhamaadka, sida ugu fiican. Hadda iPhone 12 waxaa laga heli karaa caddaan, madow, buluug, cagaar, guduud iyo casaan, halka iPhone 12 Pro ay ku jiraan garaaf, lacag, dahab iyo buluug.
Moodooyinka cusub ee iPhone-ka ah waxaan sii wadi doonnaa inta badan noocyada midabbadaas, in kastoo qaarkood la beddelayo. Sidaas darteed garaafka iPhone 13 Pro wuxuu u banneeyn doonaa madow madow, in waxay umuuqan doontaa wax aad uga madow madowga hadda jira, taas oo ka sii cirro badan Waxaa sidoo kale jira hadal midab naxaas ah, oo ka oranji badan dahabka hadda jira. Marka laga hadlayo moodooyinka "non-Pro", midab casaan ah ayaa lagu dari karaa, laakiin waxay umuuqataa mid aad khatar u ah.
Sifooyinka loo qaato in la iska siiyo
Shaashaduhu waxay sii wadi doonaan isla xallinta kuwa hadda jira, iyo sidoo kale cabirro isku mid ah. Waxa la filayaa waa taas, sanadkan haa, heerka cusboonaysiinta 120Hz ayaa yimid, in kastoo lagu xaddiday moodooyinka Pro, labadaba 6.1 iyo 6.7 inji. Shaashadaha ayaa noqon doona nooca LTPO, kaas oo yareynaya isticmaalka tamarta 15 ilaa 20%. Tiknoolajiyadda noocan ah waxay kaloo suurtogal ka dhigeysaa in la yareeyo tirada qaybaha ka hooseeya shaashadda, si boos badan looga gaaro qeybaha kale (tusaale ahaan batteriga).
Maalmihii la soo dhaafay sidoo kale waxaa jira hadal ah shaqeyn shaashad cusub, "Had iyo jeer soo bandhig" ama shaashad mar walba daaran, sida ay ula socoto Apple Watch-ka taxanaha 5. Yaraynta isticmaalka tamarta ee shaashadaha 'LTPO' waxay magdhow u noqon kartaa isticmaalka sare ee muuqaalkan yeelan lahaa, kaasoo kuu oggolaanaya inaad had iyo jeer aragto macluumaadka shaashadda oo ay ku xiran tahay iPhone-ku.
IPhone 13 wuxuu joogteyn doonaa aqoonsiga wejiga sida nidaamka amniga ee wax iibsiga, lacag -bixinta Apple Pay iyo furitaanka aaladda. Maalmihii la soo dhaafay, waxaa soo baxay warar xan ah oo sheegaya arrintaas IPhone 13 wuxuu bilaabi karaa nidaam aqoonsi wajiga cusub in ay ku shaqeyn doonto xitaa maaskaro, taas oo noqon doonta dhiirigelin muhiim ah si loo cusboonaysiiyo iPhone sanadkan.
Waxay ku dhowdahay in meesha laga saaro in iPhone -ka cusub uu leeyahay nidaamka aqoonsiga faraha, ama Aqoonsiga Taabashada, inkasta oo ay xaqiiqadu tahay waxay mar hore tijaabin kartaa nidaamka qaar ka mid ah tusaalooyinka iPhone 13. Waxay umuuqataa wax aan macquul ahayn in iPhone -kan cusub uu ku jiro astaantan, iyo inaan sugno ugu yaraan hal sano, haddii ugu dambayn lagu daro.
Waxay noqon doontaa mid ka mid ah qaybaha keeni doona warar dheeraad ah, oo leh horumarin ballaaran inta u dhexeysa, in kasta oo ay ka muhiimsan tahay 13 Pro iyo Pro Max. Moodooyinkaas waxaa ku jiri doona muraayad cusub oo 6 ah lens lens xagal ballaaran leh, marka loo eego 5ta cunsur ee kuwa hada jira. Tani waxay saameyn ku yeelan doontaa hagaajinta tayada sawirrada lagu helay muraayaddaan, oo sidoo kale lagu caawin doono ka mid noqoshada autofocus, oo hadda maqan, iyo furitaan ballaaran oo ah f / 1.8 (hadda waa f / 2.4).
ka bartilmaameedyadu way sii weynaan doonaan, markaa kordhinta cabbirka moduleka ee kamaradaha. Tani waxay u oggolaaneysaa iridda weyn ee laga soo galo iftiinka si loo helo tayo wanaagsan oo sawirro leh iftiin yar. Intaa waxaa dheer, cabbirka dareeraha ayaa sidoo kale sii weynaan doona, sidoo kale qabanaya iftiin badan. Wax walba waxay umuuqdaan inay muujinayaan in Apple ay rabto sanadkaan inay hagaajiso sawirada lagu qabtay xaaladaha iftiinka yar.
Waxyaabaha soo kordhay ee ugu dambeeyay nooma muuqdaan haddii ay joogi doonaan dhammaan noocyada iPhone-ka, ama haddii loo hayn doono oo keliya moodeellada 'Pro'. hagaajinta xasilinta muuqaalka, si loogu daro dareemaha, ka tagida xasilinta indhaha, helitaanka sawirro iyo fiidiyoowyo kafiican. Maxay umuuqataa inay hubaal tahay taas dareeraha LiDAR wuxuu gaar u noqon doonaa iPhone 13 Pro.
Waxaa jiri doona laba qaab oo kamarad cusub ah, hal sawir, si aad u qaadatid shaashadda cirka habeenka. Tani way sharxi kartaa horumar badan ayaa diiradda saarey sawirro yar-yar iyo kuwo aad u ballaadhan. Qaabka kale ee cusub wuxuu noqon doonaa fiidiyoow, oo leh saameyn cillad ah oo la mid ah qaabka sawirka sawirka, taas oo aad adiguna hadhow dib uheli karto adoo habayn kara qoto dheerka berrinka.
Batariga iyo lacag-bixinta
IPhone-ka cusub ee 13 ayaa bilaabi kara tiknoolajiyad cusub oo loo yaqaan "soft board battery", taas oo kuu oggolaanaysa inaad abuurto baytariyada leh lakabyo yar, oo keydiya booska gudaha ee iPhone-ka. Sidan oo kale, awoodda batteriga waa la kordhin karaa iyada oo aan la kordhin cabbirka iPhone-ka. IPhone 13 Pro Max wuxuu noqon lahaa midka heli lahaa kororka ugu badan ee batteriga, wuxuu gaarayaa 4,352mAh, halka moodooyinka intiisa kale ay arki doonaan koror yar.
Uma muuqato inay isbeddel ku imaan doonaan nidaamyada lacag-bixinta, fiilooyin iyo fiilooyinba. Apple waxay soo saartay nidaamka MagSafe ee leh iPhone 12, kaas oo gaadha ilaa 15W oo awood ah, halka kaybalka xamuulka ugu badan uu yahay 20W. Marka laga reebo lama filaan, xogtan ayaan ku sii jiri doonin iPhone 13 cusub. Sidoo kale looma filayo inay lahaadaan lacag beddel ah, ama uguyaraan maaha lacag dib u celin ah oo u oggolaanaysa iyaga in loo isticmaalo saldhigga qiimaha caadiga ah ee Qi. Waxaan horey u ognahay in iPhone 12 uu leeyahay dib u soo celin laakiin wuxuu ku xaddidan yahay dib u soo celinta bateriga cusub ee MagSafe ee Apple hadda bilaabay.
Waxaa loo maleynayaa in iPhone-ka cusub ee 13 uu ku jiri doono processor-ka A15 Bionic, beddelka A14 Bionic ee hadda lagu soo daray iPhone 12. Jiilkan cusub waxaa ku jiri kara “system on chip” (SoC) cusub oo aan kaliya hagaajin doonin waxqabadka aaladda, rasaastiisana awoodeeda markay dhacdo jiilba jiil, laakiin waxay kaloo kordhinaysaa waxqabadkeeda iyadoo yareyneysa isticmaalka tamarta.
Kaydinta ayaa hubaal ahaan doonta inaan isbeddelin, laga bilaabo 64GB y leh ugu badnaan 512GB. Waxaa jiray warar xan ah oo ku saabsan kordhinta cabbirka boot-ka oo gaaraya 128GB, taasoo noqon doonta war wanaagsan oo ka macquulsan, laakiin uma muuqato inay aad u badan tahay Suurtagalnimada in iPhone 13 uu kor ugu kici karo 1TB kaydinta moodooyinka Pro sidoo kale waxay u muuqataa mid aad u fog.
Dhammaan noocyada iPhone 13 wuxuu yeelan doonaa isku xirnaanta 5G, wuxuuna isticmaali doonaa modemka Qualcomm X60. Hirgelinta shabakaddan noocan ah weli waa mid aad u yar waddamada badankood, in kasta oo la filayo in sannadka 2022 uu ugu dambayntii calaamadeyn doono bilowga ballaadhintiisa guud. Ku saabsan isku xirnaanta WiFi, waxay la jaan qaadi doontaa shabakadaha cusub ee WiFi 6E, kaas oo ku daraya bandhiga 6GHz oo hagaajinaya WiFi 6, oo wali ku jira marxalad hirgalin hore ah.
Immisa ayuu ku kacayaa iPhone 13?
Ma jiro wax isbadal ah oo la filayo, sidaas darteed IPhone 13 ayaa wali ku kacaya isla sidii hore marka loo eego jiilka hadda jira.
IPhone 13 mini laga bilaabo € 809
iPhone 13 laga bilaabo € 909
iPhone 13 Pro laga bilaabo € 1159
iPhone 13 Pro Max laga bilaabo € 1259
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Terminalka IPhone » iPhone 13 » iPhone 13: bilowga, qiimaha iyo dhammaan qeexitaankiisa
Kaalay, haddii aad haysatid iPhone 12, 13 uma qalmo, ficil ahaan isla mobile
Waa hagaag, sida sanad walba, waxba iskama beddelaan 11 illaa 12 midkood, waxay dhabarka saaraan birlab
Hagaag, haddii aad sidoo kale leedahay 11 iyo 10 sidoo kale waa isku mid, iyagu mar dambe wax kuma soo cusboonaadaan.
Haa, uma qalanto iibsashada iPhone 13. Taasi waxay kor u qaadi doontaa batteriga +4300 mh. Isku -laabashada iPhone iyo iPhone 14 waxay noqon doonaan wax kale. Intaa waxaa dheer, shirkadaha waaweyn hadda waxay hirgelinayaan 4n chips, marka la gaaro 2023 waxaan yeelan doonnaa 3 xabbadood oo cabbir ah, taasi waa mid xiiso leh!
Batariyadu waxay adeegsan doonaan garaaf waxaan u malaynayaa inay dhahaan? Batariyadu waxay socon doonaan ku dhawaad ​​toddobaad.
Jetpack Joyride + oo hadda laga heli karo Apple Arcade oo xaqiijineysa in Apple ay ka dhammaatay fikradaha